Igbo - 01. Conversation - Booklet 4: Aha na aha nke Kraist nime kor'an na Bible | Grace and Truth
Home -- Igbo -- 01. Conversation -- 4 Titles of Christ
01. Mkparịta ụka na ndị Alakụba banyere Kraịst
4 - AHA NA AHA NKE KRAIST NIME KOR'AN NA BIBLE
Koran nwere ihe dị ka amaokwu 100 na-ekwu maka Kraịst. Akwụkwọ nta a na-aza ajụjụ ndị a: Olee aha na utu aha dịgasị iche iche enyere nke Kraist na Koran? Kedu ka enwere ike iji ha soro ndị Alakụba kerịta Kraịst? Kedu ka ha si dị iche na aha na aha Kraịst na Akwụkwọ Nsọ?
4.02 -- Isa ma obu Jizos?
4.03 -- Kraịst - Onye E Tere Mmanụ
4.04 -- Kraist - onye ozi si Allah?
4.05 -- Kraist - nwa nke Meri
4.06 -- Kraist - okwu nke Allah nime aru madu
4.07 -- Kraist - a mmụọ si Allah
4.08 -- Kraịst nọgidere na-enweghị mmehie-ọbụna na kor'an!
4.09 -- Kraist - ezi Ayatollah
4.10 -- Kraist - ebere sitere n'aka ndi nwere obi ebere, onye obi ebere!
4.11 -- Kedu ka Kraist si dị na kor'an?
4.12 -- Kraist - ndi di umeala n'obi na onye ezi omume
4.13 -- Kraist - onye a gọziri agọzi, ebe ọ bụla ọ ga-abụ
4.14 -- Isa ọ dị ka Adam?
4.15 -- Kraist - a ohu nke Allah?
4.16 -- Isa - onye amuma, dika kor'an
4.17 -- Jizos dị ndụ - nso Allah!
4.18 -- Mkparịta ụka nke Koran n'etiti Allah na Kraịst n'eluigwe
4.19 -- Kraist - Ihe omuma oge hour!
4.20 -- Kedu ihe Isa na-enweghị na kor'an?
4.21 -- Kraist - Onyeisi Udo
4.22 -- 25 Aha na ahanke Isa, nwa Meri, na kor'an
4.23 -- 35 Aha Jizos Kraist n'ime Baibul
4.24 -- Nnoycha
4.01 -- Aha na aha nke Kraist nime kor'an na Bible
Ndị na-agụ Bible nwere ike ịchọta 250 aha, utu aha na àgwà Jizọs na ya. Ọ bụrụ na mmadụ na-amụ kor'an ọ pụkwara ịchọta aha 250 , utu aha na àgwà nke Isa dị ka ozizi Islam si ozioma. Otu ụzọ na-enye aka ịbịakwute ndị Alakụba bụ imejupụta aha nke Kraịst site n'Akwụkwọ Nsọ n'ime utu aha Islam nke nwa Mary, ịkọwara ndị Alakụba na Nwa nke mmadụ bụ Ọkpara Chineke dị ka Jizọs n'onwe ya kọwara. Ọ bụrụ na onye ọ bụla echee na ọ ga-enwe ike ịga nke ọma n'ebughị ụzọ kwuo na ọ ga - abụ ihe ize ndụ nke ịgwa ndị Alakụba okwu ndị ọzọ.
Isa, aha islam nye Jisos, di ka okpukpu 25 na kor'an. Mana, Isa abughi Jisos, n'ihi na ewepuwo ya Chineke nime akwukwo ndi Alakpere. Ọ nwụghị n'elu obe dịka kor'an. Ọ dịghị onye maara nke ọma ihe mere Muhammad ji họrọ aha Isa kama Jizọs, ebe ọ bụ na n'asụsụ Arabic Jasu'u dị site ná mmalite n'ime akwụkwọ nke ndị Arabic Arabic dị ka ihe atụ Jizọs.
Ndị ụkọchukwu Ọtọdọks na-ekwu na okwu ahụ bụ Isa sitere n'okwu Siria nke okwu Grik maka Jizọs. Ndị ọzọ na-ekwu na Muhammad gbanwere akwụkwọ mbụ na akwụkwọ ikpeazụ nke aha Arabic bụ Jasu'u ma kpụọ Isa site na ya. Dị ka ụfọdụ omenala Africa si kwuo bụ ụzọ isi kọchaa onye ahụ. Akwụkwọ ọkọwa okwu Lisan al-Arab na-akọwa nkowa kasịnụ site n'ikpughe na mgbọrọgwụ nke okwu ahụ bụ Isa ('Ais) pụtara "anụ ụlọ" nke nwere ike ịrụ ọrụ dị ka nsí na-egbu egbu na mmetụta ozugbo.
Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị Arab na-asụ asụsụ Arabic adịghị eji aha ahụ bụ Isa mgbe ha na ndị Alakụka na-akparịta ụka, ebe ndị ozi ala ọzọ na-ekwu ugboro ugboro na ọ bụrụ na aha Isa bụ Muslim enweghị ike ịghọta na ha na-ekwu banyere Jizọs. Ya mere, ha na-agbalị imeju nkọwa nke aha Jizọs site n'Akwụkwọ Nsọ n'ime aha kor'an bụ Isa.
Anyi kwesiri icheta na n'agba ohu aha Jizos pụtara ugboro 975. Ya bụ ihe kachasị mkpa nke aha na aha niile nke Ọkpara Chineke, na nke a na-ejikarị eme ihe. Ọ ga - abụ ihe na - adọrọ mmasị ndị Alakụba na - ekwupụta na ‘’Jizọs’’ bụ nwa maka nwa Meri site na mkpughe nke abụọ (ebe) nke mbụ nye Josef "nwa nke Meri" (ebe), bụ onye na - ebu ụzọ maka iwebata (Matiu 1:21) ), mgbe ahụ nye nne ya site na mmụọ ozi Gebriel (Luk 1:31, 2:21). Onyeisi ndị mmụọ ozi kọwaara aha aha a, nke a họọrọ site n'egha ụgha: "Ọ ga-azọpụta ndị Ya na mmehie nile ha" (Matiu 1:21).
Ndị maara Hibru nwere ike ịhụ na mgbọrọgwụ nke aha Jizọs (yod-shin-ayin) pụtara ugboro 281 n'Agba Ochie n'ihe gbasara aha Chineke "Yahweh": ugboro 68 n'ime okwu ndị na-emetụta nzọpụta na enyemaka nke Jehova, na ugboro 213 na verbs, ebe Jehova n'onwe ya na-eme ma na-azọpụta. Etuputara ihe a na ebum n'uche nke aha Jisos site na mgbe ebighiebi, dika onye dere akwukwo Krismas dere, si: "amuwo Kraist Onye nzoputa!"
Okwu Grik maka onye nzoputa (soter), dika ihe ozo, putara ihe karia nani onye nzoputa site na njo uwa ma obu site na ikpe nke Chineke. Ọ bụ aha nke asọpụrụ Eze Ukwu Rom Augustus ka a na-eto eto dị ka onye na-eme udo n'ụwa mgbe ọ malitere ike ya site na mmeri ya.
Mmụọ ozi Gebriel kọwara Josef na nsogbu kasịnụ nke ụmụ mmadụ bụ mmehie ha. Ọ na-ekewapụ anyị na Chineke. Ya mere Jisos, nwa aturu nke Chineke, wepu nmehie nke uwa wee me ka ayi na Onye Nsọ di n'udo site na ichu aja ya nke agbakwunyere n'obe. Ịhụnanya ya kpaliri Ya imezu iwu nke Ememe Ngabiga site n'ọnwụ Ya. Ọbara ya bụ ihe mgbapụta nke O kwụrụ maka nnwere onwe anyị pụọ na mmehie, Setan na iwe nke Chineke (Sura al-Saffat 37:107).
Ndị Alakụba amaghị banyere ọdịdị aha Jizọs na ikike ukwu Ya. Anyị kwesịrị ikpe ekpere maka amamihe na nduzi nke Mmụọ Nsọ n'okwu anyị na ndị Alakụba ka ha nwee ike igosi ha aha zuru oke nke aha Jizọs, nke mere na ọ dị mkpa na Saran ga-etinye ndị mkpọrọ ya na Islam n'efu, ha nwere ike ịnakwere mgbagha nke nmehie nile ha n'ekele. N'ihi na Jisos mezue nzoputa ya maka ha onwe ha (Jon 19:30). Ka anyị hụ Jizọs n'anya, ka ndị Alakụba wee hụ Ya n'adịghị ike anyị.
Aha aha Jizos nime akwukwo nso bu: Onye etere manu, nke putara Mezaa ma obu Kraist. Aha a nke Jizos gosiri ugboro 569 na agba ohu na ugboro 11 na kor'an. Okwu Arabic nke al-Masih na-enweta site na "ihicha" na "iji tee mmanụ". N'agbanyeghi okwu ahu, obugh onye Ala Muslim choro na al-Masih putara "onye ihe ojo".
Anyị nwere ike ịnwa ịkọwara ha na n'ime ndị eze Agba Ochie, e ji mmanụ dị nsọ tee mmanụ na ndị nchụàjà na ndị amụma dịka ihe ịrịba ama na Jehova nke ọgbụgba ndụ ahụ nyere ha ikike na ikike site na Mmụọ Nsọ Ya ka ha bụrụ ndị a kwadebere maka ọrụ ha. Jisos n'onwe ya akowara aha ya nke nsopuru na Nazaret: "Mo Nso nke Jehova di n'aru m, n'ihi na O tere m manu ikwusa ozioma nye ndi obula: O zitewom ka m gwusi ndi obi ha tiwara obi ..." (Lk 4:18 -19)
O nweghị onye nwere ike ịkọwa aha a "Kraịst" karịa Ya. O gosiputara na ndi mmadu di n'otu nke Atọ n'Ime Otu dika "Onyenwe anyi, Mo na Ya". O kwukwara na nhicha nke Mmụọ Nsọ nwere nzube pụrụ iche: ịkpọsa ozi ọma ahụ "ndị a zọdaworo ụkwụ", na a ga-edozi obi ha.
Akwụkwọ Nsọ na-ekpughe na Jizọs Kraịst bụ eze ndị eze, bụ nnukwu onye nchụàjà na-adịru mgbe ebighị ebi na okwu nke Chineke. Ọ bụ Onyenwe anyị dị ka Agba Ọhụrụ na-emesi anyị obi ike ugboro 216! O nwere ikike na ike niile n'eluigwe na n'elu ụwa. Aha a bu "Onyenwe anyi" maka Kraist adighi efu na kor'an. Muhammad kwusiri ike na ndị Alakụba agaghị anabata mmadụ nkịtị dịka Onyenwe anyị. Ajuju nke Chineke bu ihe anaghagh ugha (Suras Al 'Imran 3:64, al-Ma'ida 5:17,31, al-Tawba 9:30,31, wdg). Ndi Alakụba na-ahụ ọbụbụeze ya na nrubeisi anyị nke okwukwe?
Aha atọ a na aha akwukwo ndi a: Jizos, Kraist, Onyenwe anyi, bu ihe iri ato na ato nke odidi nile nke aha ya ndi ekwuru na Baibul. Onye nwere ike ịmata omimi nke aha atọ a nke Ọkpara Chineke, kwenyere ma kwupụta ha, bụ Onye Kraịst ma nwee ikike ikwughachi ihe àmà nke Jizọs na Luk 4:18 n'onwe ya.
Muhammad kweere na ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Isa ma kpọọ ya onye ozi ma ọ bụ onye nnọchianya nke Allah ugboro ise (Sura Al 'Imran 3:49, Al-Nisa 4:157,171, al-Ma'ida 5:75; al-Saff 61:6). O kwukwara ya ugboro ugboro ya na ndi ozo di iche iche nke Allah (Sura al-Baqara 2:87,253: al-Hadid 57:27).
Onye nnọchianya nke Allah dị elu na kor'an karịa onye amụma. Onye nke a ga-ebu ụzọ kwusaa mkpughe nke Onyenwe ya kpọmkwem. Onye nnọchianya ahụ, na mgbakwunye, bụ iji iwu mee iwu ndị a! N'ọgba akaebe nke okwukwe ha, ndị Alakụba kwupụtara na Muhammad bụ "onye nnọchiteanya" Allah, ọ bụghịkwa onye amụma! Moses bu ihe nduzi maka Muhammad. Ọ bụ onye ogbugbo n'agbata Jehova na ndị Ya, bụ ndị ga-edu ma chịkwaa ha dịka onye na-eme iwu na onye ikpe ha. Muhammad ghọtara onwe ya na Ịsa, nwa Mary, kwa, dị ka otu ikike ahụ dịka Mozis nwere.
Ma eleghị anya, Muhammad nụrụ site na ndị Kraịst nọ na Mecca na Medina na Jizọs n'Oziọma Ya kwuru banyere eze nke Chineke, alaeze eluigwe ma ọ bụ naanị alaeze ahụ (mgbe ọ dị 100), mana ọ bụ nanị ugboro ole na ole banyere ụka Ya ! Muhammad kwenyesiri ike na Kraịst abịawo dịka onye nnọchianya nke Allah iji wulie alaeze ya n'ike na ike. Okwu Arabic maka ala sitere na nkpọrọgwu "ihe onwunwe" (mulk) nke putara: "Onye okike nwere ihe nile o kere" (Sura al-An'am 6:75, al-A'raf 7:185; -Mu'minun 23:88; Ya Sin 36:83). Kraist biara ikwu na Jehova nwere ihe ndi Israel (Matiu 21:33-46).
Muhammad amaghi na mgbe a kpọgidere Kraist n'obe, mgbe Ọ rịgoro na nchụpụ nke Mmụọ Nsọ na obodo ekpere Ya, ọdịnaya nke okwuchukwu nke ala ahụ gbanwere n'ụzọ dị mkpa. N'Ọrụ Ndị Ozi na n'akwụkwọ ozi, ndịozi na-ekwu ugboro ugboro banyere ụka ahụ gbasara alaeze ahụ! Site n'oge ah u n'isiokwu banyere nzoputa bu "ndi a kpoputara" nke Israel na mba nile. Ot'odi, Okwu ya ka oweghachite ihe nile adigh adi dika nmalite iwuli nzuko Ya, ebe Jisos n'onwe ya zitere ndi ohu Ya, ndi O siri n'uwa, laghachi n'uwa ka ha we me ka ndi nile gere. Olu ya.
Otú ọ dị, Muhammad ghọtara ọrụ nke Kraịst na okpukpe nakwa n'ụzọ agha na ụzọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọ nụbeghị ihe Jizọs kwuru: "Alaeze m abụghị nke ụwa a ... Abụ m eze. N'ihi nke a ka a mụrụ m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji bịa n'ụwa, ka m wee gbaara eziokwu àmà Onye ọ bụla nke sitere n'eziokwu na-anụ olu m. " (Jọn 18:36-37)
Muhammad abụghị nke eziokwu. O ch ogh i ichota eze Chineke nke b 'u Eze Jiz os Kra ist ma ch or o ido onwe ya n'okpuru Onyenwe any i. N'ihi ya, o kwuru na Isa dịka onye nnọchianya ndọrọ ndọrọ ọchịchị na onye okpukpe nke Allah, dịka ya onwe ya!
Ot'odi, Jisos egbusiri onwe ya ikpo onwe ya iziputa otutu oge dika ozioma nke Jon, ma O mesiri ya ike na "Nna ya" ezitewo ya ma obugh onye neme ka amara. N'ụzọ dị otú a, O gosipụtara n'ụzọ doro anya na Ọ bụ Ọkpara Chineke na ike zuru oke:
"Nka bu ndu ebighebi, ka ha mara Gi, onye nani Chineke, na Jisos Kraist onye I zitere" (Jon 17:3).
"Dika Nnam ziterem, Mu onwem zite kwa gi" (Jon 20:21).
Muhammad ama ọfọn ama ke akpanikọ nte ke Jizos ama akaman Meri, emi mînyeneke ete. Ọ nakweere ihe omimi a wee kpọọ Isa nwa Meri ugboro 23 na kor'an. Ọ gbalịrị ime ka Mary kweta na ọ gaghị amụ nwa n'alụghị di (Sura Al 'Imran 3:45-47; Ilu 19:16-23 na al.). Muhammad kwenyere na Jibril (Gabriel) kuru ume nke Allah n'ime Meri (Sura al-Hajj 21:91, al-Tahrim 66:12). Site na nkwupụta a, Muhammad bịara nso ozioma ahụ, ma ọ kwụsịrị okwu ya site n'ikwe ka Jibril kwuo na 'A mụghị Isa site na mmụọ nke Allah na Meri kama ọ bụ nanị ya kere ya. Ya mere, o tinye onwe ya n'iche na Nkwekorita nke Nicene, nke ụka nile kwupụtara:
Kraịst bụ Chineke si n'aka Chineke. Ìhè si ìhè.
Ezi Chineke site na ezi Chineke, amuworo ya, e meghi ya,
n'otu ihe kachasị mkpa na Nna.
Muhammad ghọrọ onye na-emegide Kraịst site n'ịgọnahụ chi nke Kraịst (1 Jọn 2:22-25; 4:1-5).
Na kor'an anyị na-agụ ugboro 17 iri na asa na Isa abugh nwa Chineke. Muhammed jụrụ echiche nke ọmụmụ nna nke Kraịst site na Allah na Mary. Nzukọ niile na-ajụkwa echiche a n'ụzọ ziri ezi n'egbughị oge! Otu òtù ndị Kraịst nọ na Arabian Peninal na-akpọ Mary "nne nke Chineke" ma weere Atọ n'Ime Otu dị ka "nna, nne na nwa" (Sura al-Ma'ida 5:116). A ghaghị ajụ Muhammed! Ọ bụrụ na anyị kwenye na ọ jụrụ echiche ọjọọ nke ọmụmụ Kraịst na mkparịta ụka anyị na ndị Alakụba, a ga-ewepụ nnukwu esemokwu n'etiti ha na anyị.
Akwụkwọ Nsọ na-ekwu banyere ime mmụọ ime mmụọ banyere Kraịst ma kwupụta na "Chineke, Okwu Ya na Mmụọ Ya" bụ ịdị n'otu a na-apụghị ịhụ anya. Nkọwa a na-edeghị na Akwụkwọ Nsọ nke Mary dị ka "nkwupụta nke Chineke" nke Ndị Kraịst Katọlik na ndị Ọtọdọks na-eme ka mmekọrịta ndị Alakụba na oge ụfọdụ sie ike.
Akwụkwọ Nsọ na-ekwu ugboro 59 banyere Ọkpara Chineke. Jizos kwukwara na ya "Mu onwem bu" - okwu nke iri ise na obu Ya bu Onye kpughere onwe ya nye Moses n'osisi ohia (Opupu 3:14) dika "Mu onwem bu onye." Na oge ikpe nke ndụ Ya Jizọs kwupụtara n'ihu Sanhedrin na Ọ bụ Kraịst, nwa nke Chineke dị ndụ (Matiu 26:63-68; Luk 22:70). Maka nkwupụta a, a mara Ya ikpe ọnwụ. Muhammad weghagharia ma gua kwa ihe akaebe na Kraist "bu Okpara nke Allah" rue n'ókè nke na o katuru ndi Kristian nagba àmà site n'iko Chineke ka o gbuo ha (Sura al-Tawba 9:30)!
N'ụbọchị Ya n'ụwa, Jizọs maara na onye ọ bụla nke na-akpọ onwe ya nwa Chineke n'Izrel weere ya dị ka onye nkwulu. Ya mere O gbara akaebe na Ya ugboro 80 dika Nwa nke madu na ozi oma. N'iji aha a mee ihe, o zoro aka n'amụma ahụ dị na Daniel 7:13-14, ebe "nwa nke mmadụ" pụtara n'ọhụụ dịka eze ebighi ebi na onye ikpe Chineke. Mana ihe ka otutu nime ndi Ju ghotara aha a n'ozuzu ma chee na Jisos guru onwe ya dika madu efu. Ot 'uodi, o mejuputara okwu a site na onye nke Chineke.
Ọkara nke amaokwu banyere Ọkpara nke mmadụ na-agba akaebe na ịdị umeala n'obi Ya, ọdịdị Ya, ịdị umeala n'obi na ịdị umeala n'obi ya: "Nwa nke mmadụ abịaghị ka e jeere ya ozi, kama ka o jee ozi, nyekwa ndụ ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka ọtụtụ. "(Matiu 20:28) Site na nkwupụta a, Jizọs tụgharịrị ihu ala nile. Onye ukwu ga-abụ onye kasị nta, n'ihi na eze anyị n'onwe ya dị ka ohu. Onye naeso Ya ga ab ghi onye nche kama] b orù.
Nkera nke ọzọ nke okwu ya banyere Nwa nke mmadụ na-agba akaebe na ebube ya na ike Ya dị ukwuu mgbe Ọ ga-alọghachi dịka onyeikpe nke ihe nile a kpọrọ mmadụ: "Mgbe Nwa nke mmadụ ga-abịa n'ebube ya na ndị mmụọ ozi niile dị nsọ ya, ọ ga - nọ n'ocheeze ya n'ebube eluigwe. A ga-achokọta mba nile n'ihu ya ... "(Matiu 25:31-32 et al.). Jisos bu nwoke n'ezie, nwaa ayi dika ayi no, ma obu onye n'emehie (Ndi Hibru 2:17-18). N'ihi ya, Ọ na-aghọta ma na-eche onye ọ bụla ma ga-ekpe Ya ikpe n'ụzọ ziri ezi.
Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na anyị dị njikere ịmụta usoro enyemaka a site n'aka Jizọs, bụ onye kpuchiri chi ya, ma kpughee ihe omimi nke ọdịdị Ya n'okpuru okwu nke Nwa nke mmadụ. Aha a bụ otu n'ime mkpịsị ugodi nke ndị Semites. Ọ bụrụ na ị na-ekwu banyere Ọkpara Chineke na mmalite nke mgbagwoju anya na Muslim ị ga-ahụ otú ndị na-ekpuchi ihe ga-esi mechie ya. Ma ọ bụrụ na ị mụta ihe n'aka Jizọs, ị ga-abụ onye maara ihe ma ghara ịgọnahụ eziokwu ahụ. Kama ị ga-agba akaebe na ya na ịhụnanya na amamihe, dịka ihe ndị na-ege gị ntị nwere ike ịnagide.
Muhammad nakwere ọtụtụ àgwà, utu aha na aha Kraịst na kor'an, iji merie Ndị Kraịst maka Islam. Ọ na-eji okwu ndị dị n'Agba Ọhụụ gbanwee amaokwu ya ka a weere ya dịka ezigbo onye amụma. Ọ chọrọ ịdọta Ndị Kraịst nọ na Abyssinia na ndị si na Yemen gafere onwe ha site n'iṅomi nkwenkwe ha. Anyị nwere ikike iji okwu ya dị iche iche, nke ọ gbaziri site na Bible, iji wepu ha na kor'an ma mee ka ha laghachi na ihe mbụ ha na-ekwu na ozioma, dị ka ikpochapụ nke ndị na-ekpo ọkụ n'ime usoro bara uru. Nke a nwere ike inyere ndị Alakụba, bụ ndị na-achọ eziokwu ahụ, ịchọ ụzọ ha ga-esi nweta nzọpụta n'ime Kraịst.
Site na ozioma nke John, Muhammad ugboro anọ nakweere okwu na Kraist bu okwu nke Allah ma obu okwu ya (Sura Al 'Imran 3:39,45,64; al-Nisa 4:171). Ndi nkuzi nke ndi ndu ndi ozo choputara na aha ndi Kraist n'agba anya nke ndi Ala islam ma kwuputa na Kraist bu okwu nke "Chineke" ekemere, nke n'emeghi ka odi n'iru nke Onye kachasi elu. Dika Onye kere Kraist, Chineke kwesiri ikwu, si: "Bụrụ!" Mgbe ahụ, ọ bụ. " N'otu oge ahụ ndị Muslim kwuru na-ekwu na kor'an (Al 'Imran 3:47) nwere ọnụnọ Allah, uche ya na ike ya.
Anyị nwere ikike ịkọwara ndị Alakụba na otu ihe ahụ na-egosi Jizọs. Ike nile nke okike nke okwu Chineke, ike nke ike ya, ikike mgbaghara ya, ebere Ya nke na-akasi obi na ike nke ike ya na-arụ ọrụ n'ime Ya. Na Kraist, ihe nile na ikike nke okwu Chineke di. Uche nke Chineke, amamihe Ya, iwe Ya, ịhụnanya Ya, ebere Ya, ndidi Ya, ihe nile Chineke kwuru ma nye iwu, kwere nkwa na machibido ime ka Jizọs baa n'ime. N'elu Ya ka ibu amuma nile banyere Chineke bu ubochi na Amin. Onye choro imata uche nke Chineke aghagh ile Jisos anya: O bu onyinye nke ezi obi nke Nna ya. Ọ sịrị:
"Ihe m na-agwa unu abụghị m onwe m na-ekwu, mana Nna nke bi n'ime m na-arụ ọrụ ahụ." (Jọn 14:10)
"Mụ na Nna m bụ otu." (Jọn 10:30)
Okwu puru iche nke di nime kor'an banyere odidi nke okwu Chineke n'ime Kraist negosi na Kraist bu okwu nke eziokwu. Eziokwu na ikpe ziri ezi na-egosi dị ka àgwà na aha Allah, ka amaokwu ahụ pụtara: Kraịst bụ okwu nke Allah jupụtara n'ikpe ziri ezi na eziokwu (Sura Maryam 19:34). Ot'odi, ufodu ndi ozo chogharia echiche a di egwu maka Islam ma kwue na okwu ndi a bu ihe efu ma obughi obi ndi ozo n'enweghi ihe di mkpa. Ma nke ahụ bụ eziokwu. Kraist bu ihe n'eziokwu na iwu, na kor'an, kwa (Jon 14:6). Ọ bụ karịa onye amụma - ọ bụ okwu Chineke ahụ! Okwu ndị a nwere ike ịbụ ngwá ọrụ kachasị ike gị na àmà gị nye ndị Alakụba.
Okwu ọzọ dị na kor'an na-emegide ma na-eme ka ndị nkatọ nke Alakụba "Kraịst ghara ịbụ chi", n'ihi na a na-akpọ ya mmụọ sitere na Allah (Sura al-Nisa 4:171). Okwu a na-ekwu na Kraist abụghị onye nkịtị dị ka Moses na Muhammad, ma ọ bụ ihe mgbagha nke mmụọ si Allah. K'an'an na-ekwu na Sublime na-enye ụfọdụ n'ime "mmụọ" ya n'ime Meri (Sura al-Anbiya '21:91, al-Tahrim 66:12). Ya mere, a na-ewere Isa dị ka ije ije mmụọ n'ụdị mmadụ. Site na aru ime mmụọ ya, mgbe ọ nwụsịrị n'ụwa, ọ rịgoro Allah. Na Islam, Kraist abụghị onye nkịtị, ọ bụghị naanị onye amụma dịka ndị ọzọ, mana mmụọ nke Allah! Site n'okwu a, Muhammad kwupụtara na Isa adịghị eso n'òtù ndị ọzọ ndị a mụrụ site n'ájá. Kama nke ahụ, ọ bụ nwa nwoke site na mmụọ nke Allah, ma ọ bụ "nwa mmụọ" nke Allah - dịka Koran, oke!
Ndị na-akọwa Islam ghọtara adịghị ike a na kor'an ma kpagharịa ya ka ọ pụta ìhè. Ha na-ede: N'ezie, Kraist bụ mmụọ nke Allah n'ime ahụ mmadụ, mana - mmụọ "e kere eke"! Mkpụrụ obi na-enweghị ihe ọ bụla sitere n'ime Al-Allah, bụ onye ga-abụ Chineke, apụghị ịdị na Islam. A na - eme mmụọ nke Allah niile mmụọ, dị ka ndị mmụọ ozi na ndị mmụọ ọjọọ, Gebriel na Michael. A kwuru na Kraist bụ otu n'ime mmụọ ndị a dị ukwuu nke Allah.
Ma anyị maara na a mụrụ Kraịst site na Mmụọ Nsọ nke na-adịru mgbe ebighi ebi. Onyenwe anyi gwara Ya: "Ị bụ ọkpara m; amuru m gi." (Abụ Ọma 2:7) Tụkwasị na mmụọ ozi Gebriel gwara Meri, sị: "Mmụọ Nsọ ga - abịakwasị gị, ike nke Onye Kasị Elu ga - ekpuchikwa gị, ya mere, kwa, Onye ahu di nso nke agamuputa, aguru ya Okpara Chineke." (Luk 1:35)
Ndị Alakụba maara nke a, dị ka oge Eze Hassan nke Abụọ nke Moroccoco kwadoro, mgbe nzukọ synod dị na Rabat, na ọ dịghị mmadụ na Ayatollah nwere ikike ịkpọ onwe ya mmụọ nke Allah (Ruulullah), ma e wezụga Isa, nwa Mary; n'ihi na ọ bụ naanị ya mụrụ mmụọ nke Allah!
Mgbe ekwusara omumu nke Kraist na kor'an, Jibril, onye ghotara na obu mo nke Allah na ihe omuma nke ihe nile ekpughe ya, kwere Meri nkwa na ya gaenye ya nwa zuru oke na nke nadigh nma (Sura Maryam 19:19). Okwu ahụ ejiriwo ọtụtụ ndị nkọwa. Ụfọdụ n'ime ha na-ekwupụta n'ụzọ doro anya na A mụrụ Isa n'enweghị mmehie na nsọ, ebe ọ bụ na mmụọ nke Allah mụrụ ya.
Ụfọdụ n'ime ọdịnala ndị Alakụba na-agaghachi Muhammad kọwapụtara nke a: A mụrụ ụmụ niile n'emeghị mmehie mbụ, ma Setan na-emetụta ụmụaka ọhụụ n'oge a mụrụ ha. Ọ bụ ya mere nwata ọ bụla ji eti mkpu - ma e wezụga Meri na Ịsa! Echebere ha site na ajọ ọnyá nke Setan n'ihi na 'nwunye Imran etinyewo nwa ya, Meri na ụmụ ya, n'okpuru nchebe pụrụ iche nke Allah site n'azụ nke Setan, tutu a mụọ ha (Sura Al' Imran 3:36) .
Ebe ọ bụ na Kraịst pụtara na ọ bụ okwu Chineke nke dị n'ime kor'an, ọ bụghị nanị na ọ kwusara ya ma dịrị ndụ dị ka ya si dị. Ọ dịghị ọdịiche dị n'etiti okwu ya na ndụ ya. Na Islam, kwa, Isa ka bu onye nadigh nmehie. Ndụ ya bụ okwu a na-ahụ anya nke Allah.
Ọ bụrụ na Kraịst bụ onye mmehie dịka kor'an, ọ gaara anwụ ma ọ ghaghị ichere n'ili ya maka oge nke ikpe Allah. Ma Kraịst, dị ka kor'an si kwuo, e buliri ya elu rue Allah. Ọ na-anọnyere ya. Ọ bụ otu n'ime ndị ahụ na-abịaru ya nso. O na-agwa ya okwu n'otu okwu onwe ya (Sura al-Ma'ida 5:116-118). Ọ dịghị mmehie na-ekewapụ ya na Onye Nsọ. Kraịst dị nsọ, dịka Allah dị nsọ. K'anụ n'ụzọ doro anya banyere mmehie Abraham, Moses na Muhammad (Sura Ghafir 40:55, Muhammad 47:19, al-Fath 48:2, al-Nasr 110:3). Mana banyere Kraist enwegh ihe obula, obugh na omenala, na o nwere ike mehie, mehie ma obu adighi ike.
Oziọma ahụ na-egosi anyị na ọbụna ndị mmụọ ọjọọ ghọtara ihe nzuzo ahụ na Jizọs dị nsọ, n'ihi na ha tiri mkpu, sị: "Anyị maara onye ị bụ - Onye Nsọ nke Chineke" (Mak 1:24; Luk 4:34). N'ikpeazu, mbilite n'ọnwụ nke Jisos bụ ihe doro anya nke ịdị nsọ Ya. Ọ bụrụ na Ọ ga-eme otu mmehie n'ime okwu, omume, echiche ma ọ bụ nrọ ya, ọnwụ gaara ejide Ya. Ma Kraist esiwo na ndi nwuru anwu bilie! Onye ojo a apugh igbochi nbilite n'onwu ya.
E nwere amaokwu abụọ na kor'an na-ekwu na Kraịst na nne ya bụ "ihe ịrịba ama nke Allah" maka ụwa (Sura al-Anbiya 21:91, al-Mu'minun 23:50). Amaokwu ọzọ na-ekwu na nwa Mary nanị bụ ihe ịrịba ama maka ihe a kpọrọ mmadụ (Sura Maryam 19:21). Okwu maka akara (ajatun) pụtara ọrụ ebube ma ọ bụ ihe ịrịba ama. Onye ọ bụla gụrụ okwu a na-ejikọta ya na okwu Allah na-enweta olu Ayatollah. Maka okike omumu ya, Kraist na nne ya bu ihe omuma nke Allah. Ha iche iche ha abughi ihe omuma nye ndi Kraist na ndi Ju, kamakwa ndi Hindu, ndi Buddha, ndi Alakpere na ndi ekweghi na Chineke. Kraịst bụ ihe ịrịba ama nke Allah maka ihe nile a kpọrọ mmadụ. Ya na nne ya bụ ihe kachasị ukwuu nke na-emetụta eluigwe na hel, n'ihi na kor'an na-ekwu maka ihe ịrịba ama nke Allah maka ụwa, n'ụwa nakwa n'ọdịnihu!
Kraist bu ezi Ayatollah, n'ihi na o nwetaghi akwukwo ya site na omuma akwukwo site na omumu, kama o natara ya n'aka Allah. 'Isa bu nani Ayatollah nke Chineke nyere ya. Muhammad amaghi anwa anakwere aha a maka onwe ya, n'ihi na nna ya na nne ya maara nke ọma.
Site n'ozi ozioma anyi puru ighota amaokwu a n'uzo di iche. Jizos siri: "Onye huru m hu Nnam" (Jon 14:9). Nwa Meri bụ onyinyo nke Chineke a na-apụghị ịhụ anya, ngosipụta nke ebube Ya na ìhè nke ụwa. Ọ bụ ihe ịrịba ama nke Chineke nyere maka mmadụ niile. O mezuwo ihe bu isi nke okike: Chineke kere madu n'oyiyi ya, n'onyinyo nke Chineke ka o kere ya (Jenesis 1:27). Ruo mgbe ahụ, ọ dịghị onye ọ bụla kwusiri ike ikwu, sị: Onye na-ahụ m na-ahụ Chineke, ma e wezụga Jizọs, Ọkpara Chineke, n'ihi na Ya na Nna Ya nọ n'ime Ya (Jọn 17:21-24). O choro igbanwe anyi n'udi Ya. Anyi ezighi ezi bu nmehie anyi, dika Pol na-ede, si: "Mmadu nile emehiewo ma ghara iru otuto nke Chineke" (Ndi Rom 3:23). Jizos choro iwep mmehie anyi wee mee ka anyi ghara imehie (1 Jon 3:1-3). Ihe akaebe nke ndụ gị nwere ike ikwu okwu n'ụzọ doro anya nye ndị Alakụba karịa okwu gị.
A kpọrọ Isa na kor'an ebere nke Allah (Sura Maryam 19:21). Muhammad nụrụ banyere ọrụ ebube Jizọs, na ọ gwọrọ ndị ìsì na ndị ekpenta, mee ka ndị nwụrụ anwụ kpọlite ma si n'eluigwe nweta nri ndị na-eso ụzọ ya. Nye ya, Jizos bu ihe nke ebere nke Allah. Amaokwu a emewo ka otu ndi nkụzi Muslim nke kor'an kpaliri. Ụfọdụ n'ime ha na-ekwu, sị: "Allah bụ Onye na-eme ebere (al-Rahman), Mmụọ Nsọ bụ ọmịiko (al-Rahim) na Kraịst bụ ebere (al-Rahmat)." Nwa Meri na-eburu ihe ahụ n'onwe ya nke Allah. Otu mmụọ ahụ bi n'ime ha abụọ.
Edere amaokwu a n'asụsụ Ara Arabic. Allah na-ekwu na nwa Meri bụ ebere site "anyị". Ya mere, ụfọdụ ndị na-achọ eziokwu na-ekwupụta na "Kraịst bụ ebere nke Onye ebere na nke na-eme ka otu Onye", nke na-egosi n'ụzọ doro anya ịdị n'otu nke Atọ n'Ime Otu dị na kor'an.
Ma Muhammad chọrọ ịkwụsị nkọwa a, ya mere ọ kpọrọ onwe ya ebere nke Allah na kor'an ahụ! Olee otú ebere nke Allah si pụta ìhè na ndụ Muhammad na ọrụ ya? Amaokwu ya nile na kor'an na n'omenala ọdịnala ya malitere Shari'a, iwu Islam. Site n'iwu ya, o gbalịrị ịkpụpụta ma kpebie ndụ nke ndị na-eso ụzọ ya n'ụwa na na mgbe ebighị ebi. Otú ọ dị, iwu ọ bụla na-akpata mmegide na iwe. O nweghị onye ga-erube isi n'iwu zuru oke na ruo mgbe ebighị ebi. Iwu nke Islam ga-emesị kpee ndị Alakụba ikpe. Muhammad gbasiri ike ikwupụta na ndị Alakụba nile aghaghị ịga hell (Sura Maryam 19:71-72).
Otú ọ dị, ọ bụghị naanị na Jizọs wetara iwu ọhụrụ, ma nye anyị ebere nke ịgbaghara mmehie. O nyekwara anyị ikike imezu iwu nke ịhụnanya Ya. O mere ka anyị nwee ike ịghọ ụmụ nke Chineke, wee tinye ndụ ebighi ebi n'ime anyị. Obere nke Allah na ndụ Muhammad bụ naanị iwu nke ga-emesị ghọta ndị Alakụba niile. Obi ebere nke Chineke nime Jizos Kraist, dika ihe omuma, bu amara nke ime ezi omume nke ike nke Mo Nso, ka ayi me ka ayi mezu iwu ohuru nke Kraist - site na amara nani!
Na Sura Al 'Imran anyị gụrụ na Isa bụ otu n'ime ndị ọma (3:46). Na Sura al-An'am anyi guru na Abraham, Aisak, Jekob na Noa so ndi ezi omume, dika David, Solomon na Job, Josef, Moses na Aaron. Zekaraịa, Yahya, John Baptist na Isa nọ na ndepụta ndị a kpọrọ "ndị ọma" (6:83-85). Na kor'an, inwe ezi ihe apụtaghị ịbụ onye na-enweghị mmehie, ma ọ bụ ịbụ onye na-atụ egwu Chineke.
Jizos edoziwo ajêjê a mgbe O zara nwa okoro ahê bara ọgaranya: "O digh onye obula di nma mao buru otù, nke ahu bu Chineke" (Mak 10:18). Nwa okorobịa ahụ kpọrọ Jisọs "ezigbo" nna ukwu. Mana Jisos choro imeri nrọ ya nke inwe ezi uche n'olu nke okpukpe, ma kpughewara onye choro eziokwu, na ihu zuru oke nke Chineke n'anya bu nani uzo diri madu. Anyị niile nwere adịghị ike, ihe ọjọọ na adịghị ọcha n'ime onwe anyị - ma e wezụga Jizọs! O choro iduzi nwa okoro ahu ka o mata ma kwuputa na Ya, Kraist bu "ezi", Chineke n'anu aru, ima di nso dika odidi nke madu.
Ma, Muhammad gọrọ agọ a ma kpọọ Jisos naanị otu n'ime ndị ọma. Mgbe anyị na ndị Alakụka na-ekwurịta okwu, ọ ga-enyere ha aka ịhapụ ha na ụkpụrụ omume ụmụ mmadụ ma gosipụta ịhụnanya dị nsọ nke Chineke bụ onye naanị ya kwesịrị ịdị. Ọ bụrụ na onye na-azọrọ na ọ dị mma, ma ọ bụ onye na-asọpụrụ Chineke, anyị nwere ike ịjụ ya: "Ị dị mma dị ka Allah dị mma?" Ọ ga-agọnahụ ya, mgbe ahụ i nwere ike igosi ya ezughị okè ya dị ka mmehie dị mkpa ọ dị.
Na Sura Maryam Isa ka anakpo "onye ezi omume, juputa n'omume oma na ilekasi nne ya anya, ogagh adi ajuju ma obu onye agha ike" (Sura Maryam 19:32). Ihe ndia nke Kraist nime kor'an negosi ezi omume ya. Kraist abughi nani ndi ezi omume na ndi kwesiri ntukwasi obi, ya onwe ya bu onye ezi onwe ya, idi nso nke Chineke. N'okwu a sitere na kor'an ọtụtụ àgwà ndị dị na Jizọs.
Muhammad ghọtara na 'Isa abughi onye di uku, onye obula (jabbar), obugh onye nenwegh ike imeri (qahar) dika Chineke di na Islam, ma obu nwayi obi umeala na obi umeala. O meghị ka ọchịchọ ya sie ike. O tinyeghị aka na ọgụ ọ bụla ma ọ bụ agha, dịka Muhammad mere ugboro 29. O nyere Pita iwu: "Tinye mma-agha-gi n'ọnọdu-ya: n'ihi na ndi nile were mma-agha gala n'iyi site na mma agha" (Matiu 26:52). Enye ama enyene ndiwot enye ndikpa ke ntak mme asua esie, utu ke ndiwot mmọ. Kraist bu nwoke huru n'anya, juputa n'amara na obi ebere. O nyeere ndị dara mbà n'obi na ndị ọrịa aka ma ghara ibu ụzọ buru ibu nye ndị ọgaranya na ndị ọchịchị. O kwuru, sị: "Bịakwutenụ m, unu nile ndị na-adọgbu onwe unu n'ọrụ na ndị a na-ebogbu ibu, m ga-emekwa ka unu zuru ike. Nyaranụ yok m, mụtakwanụ ihe n'aka m, n'ihi na m dị nwayọọ, dịkwa umeala n'obi: unu ga-ahụkwa izu ike maka mkpụrụ obi unu. N'ihi na yoke m dị mfe, ibu m dịkwa mfe "(Matiu 11:28-30).
Nkọwa a nke Kraist na kor'an na-eme ka ọ bụrụ ebe a na-apụghị ịkọwapụta ngọzi nile nke Allah (Sura Maryam 19:31). Eziokwu a kwekọrọ na nkọwa nke Akwụkwọ Nsọ na akwụkwọ ozi Pọl na chọọchị dị na Efesọs: "Ka Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst bụrụ onye a gọziri agọzi, Onye jiworo ngọzi ime mmụọ ọ bụla gọzie anyị n'ebe ndị dị n'eluigwe n'ime Kraịst" (Ndị Efesọs 1:3) .
Amaokwu nke kor'an banyere Kraist a gọziri agọzi emewo ka ndị Alakụba nọ n'India na Pakistan bịakwuru ndị Kraịst gburugburu ha na-arịọ ha ka ha kpee ekpere ka Kraist dị ndụ gwọọ ha. N'amaokwu a, anyị na-agụ ọ bụghị naanị na Kraịst nwere ike ịgọzi, gwọọ ma zọpụta n'ụwa a, ma ọ pụkwara ime nke a na ụwa na-esote mgbe ọ rịgoro. Ndị Kraịst nọ n'Eshia egeghị ntị ngwa ngwa nke ndị Alakụba wee zaa, sị: "Ekpere anyị maka gị abaghị uru ọ gwụla ma ọ bụrụ na ị kwenyere na Kraịst, chegharịa maka mmehie gị ma rịọ Kraịst mgbaghara." Ndị Alakụba chọrọ enyemaka ngwa ngwa zara, sị: "Anyị kwenyere na'Isa, mmụọ nke Allah n'anụ ahụ, onye gwọrọ ndị ọrịa na kpọte ndị nwụrụ anwụ. Ọ ga-agwọkwa taa, n'ihi na ọ na-adị ndụ na Allah ma na-agọzi onye ọ bụla na-abịakwute ya. "N'ezie, Jizọs Kraịst kwanyere nkwanye ùgwù nke ọtụtụ ndị Alakụba ùgwù, gwọọ ha ma nyere ha aka ná nhụjuanya ha. N'ebe Ya ka] diri ebere. O nwere ikike nke Chineke. Onye kwere na Ya, nwe okwukwe ya dika nkpuru mustard, ma tie mkpu: meere m ebere! nwere ike inweta ebere na ngọzi nke Onyenwe anyị na Onye Nzọpụta anyị.
Muhammad kọwara Isa site na aha 25 na utu aha di iche iche na kor'an. Ọtụtụ n'ime aha ndị ahụ na-asọpụrụ nwa Meri n'enweghị ihe ọ bụla ma bulie ya elu karịa ndị amụma nile nke Allah na ndị ozi ya. Otú ọ dị, Muhammad gbara akaebe na ihe ùgwù ndị a nke Kraịst karịsịa iji merie Ndị Kraịst nọ ya gburugburu ka ha bụrụ Alakụba, site n'ime ka Islam dị ka nkwenkwe dịka Iso Ụzọ Kraịst.
Ka ha wee ghara ime ka ndi Alakụba ya gbaghoju anya, ka ha we ghara iga Islam ma chigharia n'iso ndi Kristian, o ghaghi iwebata Isa, onye o buliri elu, rue ala nke islam! Mgbe ha kwusịrị okwu ụbọchị atọ na Medina na bishọp na eze Wadi Nadjran na ndị nnọchianya ha bụ Ndị Kraịst iri isii na-asụ Arabic, Muhammad kwubiri arụmụka ya ndị bu ụzọ n'ime Kraịst na amaokwu doro anya:
"N'ezie, maka Allah Allah dị ka Adam, onye O kere n'ájá. Mgbe ọ sịrị ya: Bụrụ! ọ bụ. Eziokwu sitere n'aka onyenwe gi, ya mere echegbula ya!" (Sura Al 'Imran 3:59-60)
Amaokwu a na-emeghachi ndị Alakụba ugboro ugboro iji mesie ya ike na 'Isa abụghị onye a mụrụ n'enweghị nna. Adam, kwa, ekere okwu nke Allah, Iv we si na ya si n'otu n'ime ọgiriga ya. Ya mere, omumu nke Kraist abughi ihe puru iche.
Ma arụmụka ndị a bụ ndị na-enweghị atụ. Dika kor'an si kwuo, ekpughi ya n'ájá, dika Adam, obughi site n'iwu nke Allah, kama nke Mo nke Al-Allah n'eme Meri. Adam na Iv dabara na nmehie, dika kor'an, ma Isa emegh. A chụpụrụ Adam na Iv na Paradaịs ma nwụọ na Chineke kewapụrụ ha. Ma, nwa Mary na-ebi ndụ na Allah, ọbụna dị ka kor'an. Mgbe anyị na-agbaso akwụkwọ ndị Alakụba, anyị nwere ike ịhụ na ọ bụghị ihe ziri ezi ịsị na Isa dị ka Adam, n'ihi na e mere ájá site n'ájá, ma Isa bụ mmụọ sitere n'aka Chineke n'ụdị mmadụ.
Baibul na-agba akaebe ugboro ugboro na Jizọs ghọrọ mmadụ ma nwatakịrị. O wee yie Adam na nwara dika anyi no, ma o no n'enweghi nmehie. Jizọs kpọrọ onwe ya nwanna anyị. N'otu oge ahụ Ọ bụ Onyenwe eluigwe na ụwa na ezi Chineke site n'aka ezi Chineke ahụ. Ọ bụ nwa Abraham na nwa Devid. N'ikpeazụ, ọ bụ Ya bụ Ọkpara Chineke ma bie ndụ zuru oke na Ya. Ya mere Jizos bu nwoke n'ezie Chineke. Ihe omuma a abughi ihe ezi uche, ma o bu ihe ime mmuo. Amamihe anyị enweghị ike ịghọta ihe omimi a n'enweghị ihe ọmụma nke Mmụọ Nsọ! Anyị ga-enwe ndidi n'ebe ndị Alakụba nọ mgbe ha na-apụghị ịghọta ngwa ngwa eziokwu abụọ a na Kraịst nke onwe ha. Ikpe ekpere maka Muslim nwere mmasị na nnapụta ya site na mmụọ ya na-emegide Kraịst dị nnọọ mkpa dịka ihe àmà nke Mmụọ Nsọ na-eduzi anyị bụ nke anyị rịọrọ maka n'ekpere.
Na kor'an, Isa nabata onwe ya dika "ohu nke Al-Allah (Abdullahi)" nime okwu ya abua dika nwa amuru nwa (Sura Maryam 19:30). Ugboro ugboro Muhammad kpọrọ Isa site na aha a (Sura al-Nisa 4:172; Maryam 19:93, al-Zukhruraf 43:59). N'okpuru ihe nile o choro iwepu chi nke Isa site na akpa nke ndi Alakpere ya.
Site na nbibi a Muhammad me ka Kraist bia nso nkwa nke Chineke banyere ohu Ya ahutara na Aisa isi 40 ruo 66. Ihe nile ekpughere n'ebe ahu banyere ohu nke Chineke puru ighota ya dika Isa nke ohu . Nkọwa nke onye elelị - dika Aisaia 53:4-12 o were n'onwe ya ajọ omume anyị na ntaramahụhụ anyị - nwere ike ime ka ndi Alakụba mara. N'ihe odide ahu, ayi agugh okwu nke bu "Okpara Chineke," ma obu okwu "cross". N'ihi nke a ndị Alakụba nwere ike ịnakwere ma ghọta nkwa a gbasara ohu nke Chineke. Apostle Paul ama etịn̄ akwa utọ Isaiah 53 ke ini enye akadade Christ ke leta oro enye ekewetde ọnọ esop ke Philippi nte nte ẹkenamde enye: "... Kraist Jizos ... ama anam idemesie ke idemesie; ohu, ma na-abịa n'ụdị mmadụ. N'ịbụ onye a hụrụ dị ka mmadụ, ọ wedara onwe ya ala wee rube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ nke obe. Ya mere, Chineke ebuliwo ya elu nke ukwuu ma nye ya aha nke di n'elu aha obula, na n'aha Jisos ka ikpere nile gesi isi ala, nke ndi di n'elu igwe na nke ndi no n'elu uwa na nke ndi no n'okpuru uwa, ka ire obula we kwuputa (ọbụna Muhammad!) na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị, iji wetara Chineke bụ Nna otuto." (Ndị Filipaị 2:7-11)
Muhammad gara n'ihu Islamise nwa Mary ma kpọọ ya onye amụma (Sura Maryam 19:30). Tupu, ọ kọwaara ya ugboro ise dịka onye nnọchianya nke Allah na okwu ya. Ma site na ikwuputa aha ya dika onye amuma o choro ighota na Isa adighi elu karia onwe ya. O Dighi iheo bula ochoro ka ya onwe ya no n'okpuru Kraist.
Koran kwuru ọtụtụ ndị amụma site n'Agba Ochie na aha. Na omenala ndị Alakụba Muhammad na-ekwu okwu banyere ndị amụma Allah 200,000, ma na-akpọghị aha ha. Ha na-eweta ozi ọma sitere na Allah (Sura al-Baqara 2:213, al-An'am 6:61) na ịdọ aka ná ntị banyere ikpe ya (Sura al-Baqara 2:213 et al). A kpagburu ha ma gbuo ha (Sura al-Baqara 2:61,87,91, Al'ran 3:21, 112,113,181,183, Al-Nisa 4:155, 157; al-Ma'ida 5:70). 'Isa wee soro ha, dị ka kor'an (Sura al-Ma'ida 5:46).
Aha nke Isa dika onye amuma naenye ayi ohere ime ka ihe ndi Kraist mara site na ozioma: "Unu echela na abiara ibibi iwu ahu ma obu ndi amuma; abiaghm ibibi ha kama imezu ya. N'ihi n'ezie, ana m asị gị, ruo mgbe eluigwe na ụwa gafere, otu ihe ma ọ bụ otu ụzọ dị iche iche agaghị agabiga iwu ruo mgbe e mezuru ihe niile" (Matiu 5:17-18).
Ọnọdụ nke Isa dịka onye amụma nọ na Islam nwere ike inyere aka ịchọta ebubo nke ndị Alakụba na agbagha Agba Ochie!
N'ụzọ dị mwute, Muhammad apụghị ịgọnahụ ọdịdị ebighị ebi nke Kraịst. O gbara akaebe ugboro abụọ na Allah emewo ka ya onwe ya bilie (Sura Al 'Imran 3:55, al-Nisa 4:158). A na-ewerekwa Isa dịka "onye a na-akwanyere ùgwù nke ukwuu na nke a na ụwa nke ọzọ" na "otu n'ime ndị a bịaruru nso (Al-Allah)". Muhammad ji obi ụtọ. Mgbe ọ kọwara Ndị Kraịst na Isa anwụghị n'obe, o kwere ka Allah bulie ya onwe ya n'ime eluigwe (Sura Al 'Imran 3:55, al-Nisa 4:158).
Lee ihe ịtụnanya ọ bụ! K'anụ na-egosi na Jizọs dị ndụ! Ọ nwụghị anwụ! Okwu iwu (fatawa) si Saudi Arabia kwenye n'oge anyị na Isa biliri Allah n'ime ahụ ya, ya na nkpuru obi ya na mmụọ ya. Ọ bụ ndị ohu eluigwe kachasị elu. Ọ nwere "ihu dị elu" dịka onye a na-asọpụrụ. Ọ dịghị onye nwere ike ịbanye n'eluigwe n'enweghị ịgafe Kraịst. Ụfọdụ ndị ndụmọdụ ime mmụọ na-ekwu na okwu a (wajihun) na-enye anyị ohere ikwu na Kraịst bụ onye ogbugbo, nnukwu onye nchụàjà na onye na-akwado ndị na-eso ụzọ ya, bụ ndị na-agba ọgbụgba ndụ siri ike na Allah (Sura al-Ahzab 33:7).
Kraist, dika kor'an, guzo n'iru Allah dika ndi ozo, Jibril, cherubim na seraphim. Ọkụ dị iche iche nke Allah adịghị ekpochapụ ya n'ihi na ọ bụ mmụọ nke Allah ma biri n'ụwa n'enweghị mmehie. Muhammad kwenyere ọtụtụ echiche sitere na ozizi Ndị Kraịst anyị. Mana ọ dịghị ekweta na Kraist nọ n'ocheeze ya na Nna Ya (Mkpughe 3:21). O kwere ka ewe me ka Isa bia nso n'oche eze ahu, nke di nso, ma ogagh adi n'ocheeze ya na Nna ya. Nke ahụ bụ ụdị nke Muhammad: O yiri ka ọ na-anabata pasent 90 ruo 95 nke eziokwu ahụ, ma o jiri nwayọọ sụgharịa isi ihe dị mkpa (Daniel 7:13-14).
Na mgbakwunye na nke a, anyi na-aguta na kor'an ihe mgbagha ngwa ngwa na Allah, ndi mmụọ ozi nile, Michael na Jibril kwesiri ikpe ekpere maka Muhammad ya na ndi kwere ekwe nile nke Muslim, ka nkpuru obi ya wee hu udo n'udo (barzakh) (Su¬ra al-Ahzab 33:56). Otú ọ dị, site na Kraịst, nke ahụ bụ eziokwu, dịka Oziọma ahụ si dị, Ọ na-ekpe ekpere maka ndị na-eso ụzọ Ya, ọ bụghị ha maka Ya. Jesus ndụ - Muhammad anwụwo! Nke a bu nchikota ndi mmadu kachasi ike n'ile ihe omuma uwa! Onye na - eso Jizọs, na - agbaso okpukpe nke ndụ! Onye na - agbaso Muhammad, na - eme ngwa ngwa n'ime ogwe aka nke ọnwụ.
Na Sura al-Ma'ida anyị na-agụ banyere mkparịta ụka n'etiti Allah na Kraịst n'eluigwe mgbe Isa nwụsịrị n'udo ma mee ka Allah bulie ya elu n'onwe ya (Sura al-Ma'ida 5:116-118). Mgbe Kraist rutere n'eluigwe, onye ahụ e buliri elu jụrụ ma ọ kụziiri ụmụazụ ya ịsọpụrụ nne ya na ya onwe ya na Allah dị ka atọ (atọ). Kraist ziri ezi nakwere ebubo a di nkpa na kor'an ma kwenye na ya bu onye ezi omume site na otutu mgbagha nke Islam banyere eziokwu ime mmuo ya.
Otú ọ dị, na àmà ya, Kraịst kpọrọ Allah onye àmà na onye na-elekọta ụmụazụ ya ụmụ mgbei, dịka Kraist n'onwe ya bụ onye àmà ha na onye nlekọta tupu oge ahụ. N'elu nke eluigwe nke Chineke na Kraist nwere otu aha, shahid. Anyị nwere ike ịtụle Abụ Ọma nke 23 dị ka ebe Akwụkwọ Nsọ si kwuo okwu ahụ, ebe Devid kwupụtara, sị: "Onyenwe anyị bụ onye na-azụ m!" N'otu ụzọ ahụ Jizọs gbara akaebe na Oziọma na Ya onwe ya bụ onye ọzụzụ atụrụ ọma nke na-enye ndụ Ya maka atụrụ Ya (Jọn 10:11). N'Islam, Isa nwere ọbụna ụfọdụ n'ime àgwà nke Allah (Sura al-Nisa 4:159)! Na kor'an, a dịghị enye ụdị mmadụ ọ bụla dị otú ahụ Chineke mọbụ mmadụ.
Na omimi nke nkpuru obi ha ndi Alakụba na-atụ egwu ụbọchị nbilite n'onwu, n'ihi na mgbe ahu Allah ga-abia ikpe ha. Kraist na-enwe ebe kachasị mma na Muslim eschatolocus. Ugboro ugboro omenala na-ekwu na Isa ga-alaghachi na-emegide Kraịst, igbu ndị ezì niile dị n'ụwa ma bibie obe niile na ụka na n'ili. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ ga-alụ ma mụọ ụmụ. Dị ka onye ngbanwe nke Islam, ọ ga-eme ka mmadụ nile gbanwee, gụnyere Ndị Kraịst (Sura al-Nisa 4:159), gaa Al -lah. Mgbe o mezuru ya ọrụ ọ ga-anwụ, kwa, na a ga-eli n'etiti Muhammad na Abu Bakr na Medina. Nke a ga-abụ oge ikpebi nke ọdịnihu, n'ihi na n'oge ahụ Al -lah ga-abịa ikpe ụwa ikpe. Ọ ga-akpọlite ​​Muhammad na Isa, kpọgide ha n'ocheeze ma kwe ka ha kere òkè na ikpe nke ụwa. Muhammad ga-ekpe ndị Muslim na-ekpeghị ekpere, kwụọ ụgwọ ma ọ bụ lụọ ọgụ, ebe Isa ga-ekpe ndị Juu na ndị Kraịst niile na-anabataghị Islam ikpe.
Ihe omuma a di nkpa, onwu nke Kraist mgbe obia nke ugbo abua, ka akpotara ya, na kor'an, "ihe omuma nke oge" (Sura al-Zukhruf 43:61), n'ihi na elere ya anya na njedebe nke ụwa.
Otu nwanyị na-ekpechite anya Catechist nọ n'Andonesia, bụ onye kụziiri Islam na ụlọ akwụkwọ ala, kwupụtara, sị: "Mgbe m ga-ewute ụmụ m ụkpụrụ Islam banyere njedebe nke ụwa, enwere m iwe mgbe niile n'ihi na Isa na-adịghị ike ma dị nwayọọ ga-alaghachi igbu àmà na-egosi! O nwegh i ihe ob ula banyere onye amuma agha bu Muhammad na njedebe nke uwa! Achọrọ m ịhụ Muhammad dị ka onye mmeri ma ọ bụghị nwa Mary! Otú ọ dị, echere m na ọ bụrụ na Kraist ga-esi n'eluigwe bịa n'ezie ka m kwadebe onwe m maka ọbịbịa ya. M ga-agụ ihe ọ na-aga ịjụ m, ihe o nyere n'iwu na ihe ọ machibido. Ya mere nkuzi nke Islam banyere nloghachi nke Kraist duru m gaa ozioma ma nyere m aka ichoputa onye nzoputa bilitere n'onwu ya. "Ubochi a bu onye nkuzi nke ndi Kristain raara onwe ya nye ma gbaa akaebe banyere ezi Jizos na nloghachi ya.
N'oge anyị na syncretism, anyị ekwesịghị ikwe ka aha na utu aha maka Kraịst na kor'an iji kpuchie anyị, mana anyị ga-eji ha dị ka mmalite nke mgbasa ozi ala ọzọ anyị na ndị Alakụba iji duzie ha nkọwa zuru ezu. Onye Alakụba Islam enweghị ike ịzọpụta Muslim ma ọ bụ ịgbanwe ya ka a mụọ ya ọzọ!
Anyi kwesiri imata na n'ime kor'an ihe nile edere banyere chi nke Kraist na ike ya nile na efu. Ọ dịghị ihe ọ bụla edere banyere àjà mgbapụta ya n'obe ma ọ bụ ikike ya dị ka nnukwu onye nchụàjà.. Ihe nke abụọ na nke atọ nke okwukwe anyị dị ka a na-ahụ na Core na-efu kpam kpam na Islam! Muhammad aghọtaghị njikọ ime mmụọ dị n'etiti Kraịst na chọọchị ya. Ya mere, anyi nwere ike iji aha Kraist ndi ekwuru na kor'an dika ihe ndi ozo na ndi ozo iji kọwa umu Ishmael.
Ebumnuche nke nko a nke aha na utu aha nke Kraist n'ime Baibul na nke kor'an abughi nani iji mesie ike ndi ozo nke ndi ozi ala iji soro ndi Alaka kwue okwu, kamakwa igosi onye puru iche nke Jisos Kraist na okpukpe abua . Ọ bụ àgwà kachasị mma nke biri n'ụwa - ọbụna dị ka kor'an si dị. Muhammad enweghị ike ịgọnahụ eziokwu ahụ bụ na nwa Meri bụ nwoke udo. Onye amụma nke ndị Arab gosipụtara onwe ya ịbụ onye agha. E nwere ọtụtụ ọbara na aka ya. Ihe ndi ndu ya mere ka Muhammad di nma kari idi umeala n'obi ya. O mere ya ka o kwuo na Sura Maryam: "Udo di n'onu m ubochi amuru m, ubochi mu onwem nwuru, na ubochi mgbe agam ezigam ndu" (Sura Maryam 19:33).
Site na mgbe a mụrụ ya ruo mgbe ọ nwụrụ, ọbụnakwa na mbilite n'ọnwụ ya, obi ụtọ nke Allah zuru ike wee dakwasị Ọkpara Mary. Kraịst mere ka udo dị n'etiti Chineke na mmadụ. Ọ hụrụ ndị iro Ya n'anya. Ọ họọrọ ịnwụ n'ebe ha na-egbu ha. Jizọs dị obi umeala ma dị umeala n'obi. O nweghi ike ikwu onwe ya site n'ike. Ọ bụ onye mmeri site n'okwukwe Ya, ịhụnanya Ya, ndidi Ya na olileanya Ya. Ya mere ndị Alakụba na-ekwu okwu ndị ahụ, "Udo dịrị ya!" (As-salamu 'alayhi) mgbe ọ bụla ha na-akpọ aha ya. Ha na-eche na Kraịst bụ ezigbo onyeisi nke udo. Otú ọ dị, ndị Alakụba na-eji okwu a asọpụrụ maka ndị amụma ndị ọzọ. Ma ndi amuma ndi ozo natara udo ha. Naanị Kraịst bụ isi iyi nke udo. N'ozi oz] O kwuru: "Udo m ka m naenye gi. Anaghị m enye gị dị ka ụwa na-enye. Unu ekwela ka obi ghari unu obi, unu atula egwu "(Jon 14:27). O nwere ike igbanwe ndi naeso Ya ka ha buru ndi na-eme udo (Matiu 5:9).
Nke a bụ ndụ ebighị ebi,
ka ha wee mara Gị,
nanị ezi Chineke ahụ,
na Jizọs Kraịstonye Ị zitere.
Aha ma ọ bụ Aha nke Isa
'Isa 25 2:87.136.253; 3:45.52. 55.59.84; 4:157.163. 171; 5:46.78.110.112. 114.116; 6:85; 19:34; 33:7; 42:13; 43:63; 57:27; 61:6.14
Nwa Meri 23 2:87.253; 3:45; 4:157. 171; 5:17(ugboro abụọ).46.72. 75.78.110.112.114.116; 9:31; 19:34; 23:50; 33:7; 43:57; 57:27; 61:6.14
Na Kraịst 11 3:45; 4:157.171.172; 5:17 (ugboro abụọ).72 (ugboro abụọ). 75; 9:30.31
Onye ozi nke Allah 5 3:49; 4:157.171; 5:75; 6:61
Ndị ozi ya n'ozuzu 3 2:87.253; 57:27; et al.
Okwu nke Allah 4 3:39.45.64; 4:171
Okwu nke eziokwu 1 19:34
A ohu nke Allah 4 4:172; 19:30.93; 43:59
A mmụọ si Allah 3 4:171; 21:91; 66:12
Ihe ịrịba ama maka ndị mmadụ 3 19:21; 21:91; 23:50
Otu n'ime ndị ọma 2 3:46; 6:85
Dị ka Adam 2 3:59; 43:59
Onye akaebe 2 4:159; 5:117
Nwa na-eme ihe n'eziokwu 1 19:19
A ebere nke Allah 1 19:21
Onye amụma 1 19:30
Otu n'ime ndị amụma 16 2:61.91.136.177.213; 3:21.80.81.112.181; 4:69.155.163; 17:55; 33:7; 39:69; et al.
Ọ na-eweta ozi ọma 2 2:213; 6:61; et al.
Ọ na-akwado Torah 2 5:46; 61:5
Otu n'ime ndị na-adọ aka ná ntị 1 2:213; et al.
Ezi omume nye nne ya 1 19:32
Ọ dịghị onye nbibi na-enweghị nsogbu 1 19:32
Ngọzi, ebe ọ bụla ọ ga-abụ 1 19:31
A na-akwanyere ùgwù na ebe a 1 3:45
Buru nso Allah 1 3:45
Ihe ọmụma nke awa 1 43:61
Udo di n'aru ya 1 19:33
(nyere iwu dika oge ha)
Onyenwe anyị 216
Nwa nke madu 80
Ọkpara Chineke 59
Nna ukwu 56
Abụ m 50
Nwa Atụrụ Chineke 33
Onye nkuzi 27
Onye nzoputa 26
Onye Na-abịa Ya 20
Onye Amụma 16
Nwa Devid 10
Ohu nke Onyenwe anyi 10
Onye Nsọ 10
Ezi Onye 10
Onye isi nchu aja 10
Isi nke Chọọchị 10
Onye Pụrụ Ime Ihe Niile 10
Onye Nkwado 9
Nkume Nkume 9
Onye nke Elu 8
Omuma nke Chineke 7
Ibu Ubuo 7
Onye Kasị Eleda 6
Edere aha na utu aha ndị a nke Jizọs Kraịst n'aha 250 aha na utu aha ya n'ime Akwụkwọ Nsọ (dị ka nsụgharị German nke Dr. Martin Luther). Ndepụta a nwere ike ịgbanwe, ebe ọ bụ na a ga-enwe esemokwu ugboro ugboro dị ka nsụgharị dị iche.
4.24 -- N N O Y C H A
Ezigbo onye na-agụ!
Ọ bụrụ na ị mụọ akwụkwọ a jiri nlezianya, ịnwere ike ịjụ ajụjụ ndị a. Onye ọ bụla zara 90% nke ajụjụ niile n'akwụkwọ nta asatọ nke usoro isiokwu a n'ụzọ ziri ezi, nwere ike ịmepụta akwụkwọ n'aka anyị
ụzọ aka maka eduzi mkparịta ụka n'etiti ndị Alakụba banyere Jizọs Kraịst
dịka agbamume maka ọrụ ọ ga-arụ n'ọdịnihu maka Kraịst.
Ole aha, utu aha na àgwà nke Kraịst nwere ike ịchọta na Bible na ole ole na kor'an?
Gini ka aha ahu bu Isa bu ndi Alakpere na ot'ndi aha ka aha a sibu na kor'an? Gini mere ndi ozi ala ọzọ ndi mba ozioma ji jiri aha a eme ihe mgbe ndi Arab ndi ozo zere iji ya? Gini mere Jizos abugh Jizos? Ogologo oge ole ka anyị kwesịrị iji aha ahụ bụ Isa n'ime okwu anyị na ndị Alakụba ruo mgbe anyị dugaara ha ezigbo Jizọs?
Ugboro ole ka aha Kraist (al-Masih) puta na kor'an? Gịnị ka utu aha a pụtara nye onye Alakụba na gịnị ka ọ bụ Onye Kraịst? Kedu ka Kraist n'onwe ya si kọwaa aha a n'ime Oziọma?
Gini bu ihe di na ozi ma obu onye nnọchianya (rasul) dika edere ya na kor'an maka Kraist? Ntak emi Muhammed ama eketịn̄de ibuotikọ "Edidem" ye "Ọbọn̄" ke Christ, ke ntak emi enye mîkọfiọkke edisịm Christ?
Gini mere nwa nke Meri na Islam abugh nwa nke Allah? Kedu ka ndi Alakụba ga - esi kwupụta na amughi nwa nwoke nke Kraist site na Meri ma n'otu oge ahu weghachite chi ya?
Olee okwu abụọ dị na Core Nicene na-egosi n'ụzọ dị nkenke ọdịiche dị n'etiti Islam na Iso Ụzọ Kraịst na nghọta ha dị iche iche banyere Kraịst?
Gini mere Kraist ji kporo onweya Okpara nke mmadu n'okpukpu iri asatọ na ozioma anọ dika ochi chiri nao din'onozo wee kwup ta naob Nwa Chineke?
Gịnị ka Muslim chere ma ọ bụ iche n'echiche mgbe ọ na-agụ na kor'an na Kraịst bụ Okwu si Allah ma ọ bụ Okwu ya? Kedu ihe nke Akwụkwọ Nsọ nwere ike ịmejupụta utu aha ndị a?
N'ihi gịnị ka Muhammad ji kpọọ Kraist ka ọ na-eje ije Mmụọ nke sitere n'aka Allah bụ onye si n'ebe ọ nọ rịgoro ma laghachikute ya?
N'ihi gịnị ka ọ ga - ekwe omume ka Mmụọ Nsọ dịrị na Islam dịka Ọ nọ na ozioma?
Olee otu anyi puru isi jiri okwu nke kor'an zakiy (nke di ọcha) nye Isa, nke putara na o nwegh ihe ojoo na enweghi nmehie site na nwata? Kedu ihe anyị nwere ike ịkọwara ndị Alakụba site n'enyemaka nke okwu a?
Gini ka okwu ayi na ndi Alakụba na-ekwu na ya bu kor'an nke bu nwoke Ayatollah nke Allah choputara n'akụkọ ihe mere eme uwa?
Olee ụzọ nke Koran si meghere anyị site n'igosi na Kraịst bụ onye nke ebere nke Allah?
Olee otú Kraist si dị na kor'an ebe ọ bụ na Muhammad dere ya dịka otu n'ime ndị ọma? Olee otu anyi ga esi gosi Muslim na nwa nke Meri di nma dika Chineke?
Gịnị ka kor'an pụtara mgbe o kwuru na Isa dị ezi omume nye nne ya? È nwere ụzọ isi gosi ezi omume nke Chineke site na iji okwu a?
Olee otu anyi puru isi megharia olu ndi na-adighi nma nke okwu nke kor'an na Kraist abughi onye obi ojoo ma obu onye isi obi ojoo ma gbanwee okwu a n'ime okwu oma nke ozioma?
Gini ka akuko nke kor'an banyere Jizos putara, mgbe akowara dika onye azizi n'uzo obula ozo, n'elu uwa di ka odi n'elu igwe?
Gini mere Muhammad ji achikota akuko ya banyere Kraist nime otu okwu na Kraist di ka Adam? Kedu ihe na-ezighi ezi na nkwupụta a ma e jiri ya tụnyere ihe ndị ọzọ gbasara Koran banyere Isa?
Olee otú anyị ga - esi mejupụta Kraịst aha ya bụ "Slave of Allah" (Abdullahi) na Oziọma zuru oke? Ebee n'ime Bible ka a kpọrọ Jizọs ohu (ma ọ bụ Ohu) nke Onyenwe anyị?
N'ihi gịnị ka Isa ji dị na kor'an ọ bụghị nanị otu n'ime ndị amụma ma dị iche iche na àgwà dị ịrịba ama? Kọwaa ihe nzuzo a na mkpirikpi.
Gini ka Muhammad gaesi kwuputa na Kraist bu ihe kwesiri ntukwasi obi n'uwa nka na n 'uzo ya na na o no nso Chineke mgbe o rigoro ya? Kedu ka Muhammad ga-esi kwupụta na Kraịst dị ebube n'ụwa a nakwa na nke ọzọ nakwa na ọ na-ebi nso Allah mgbe ọ rịgoro n'ebe ọ nọ?
Gini bu okwu nke nkwekorita nke kor'an di n'etiti Allah na Kraist mgbe o rigosiri? (Sura al-Ma'ida 5:116-118) Gini mere e ji nye Kraist aha ahu dika Allah (shaheed = onye neche ihe, onye akaebe)?
Olee otú ndị Alakụba si eche na mmalite nke ụbọchị ikpé ga-adabere n'ụzọ doro anya na ọbịbịa nke abụọ Kraist?
Amaokwu ndị dị na kor'an ka ị nwere ike ịkọwa na ọ bụ naanị Jizọs bụ Onyeisi Udo, onye na-eme udo na onye naanị ya bụ ezi Muslim n'ụwa?
Akụkụ ndị dị aṅaa dị mkpa nke Akwụkwọ Nsọ ka ọ na-efu kpamkpam na kor'an? Gịnị kpatara nke a?
Ruo n'ókè ha aṅaa ka e kwere ka o kwe anyị omume iji jupụta aha, aha na àgwà nke Kraịst, na nkọwa zuru ezu nke ozi ọma nke okwu ndị a?
Ntak emi ndi Alakụba nwere nnukwu ihe isi ike na-aghọta ihe okwu ndị Kraịst anyị dịka mgbe anyị na-ekwu banyere nzọpụta ma ọ bụ onye nzọpụta? Ntak emi ediwak ntiense ke otu mme Christian mîkekereke ye mmọ?
Ruo n'ókè dị aṅaa ka Jizọs na ndịozi Ya mere ka ha gbanwee ihe àmà ha banyere ndụ na echiche nke ndị Juu na mba dị iche iche iji gosi eziokwu zuru oke nke Oziọma ahụ nye ha? Olee otú Pọl si ghọọ onye Juu nye ndị Juu na mba dị iche iche nke mba dị iche iche? Gini bu ihe kachasi n'olunke usoro nke ikwusa ozio uzo nke Baibul?
A na - enye onye ọ bụla nọ na ajụjụ a ohere iji akwụkwọ ọbụla dị ya mma na ịjụ onye ọ bụla a pụrụ ịtụkwasị obi mara ya mgbe ọ na - aza ajụjụ ndị a. Anyị na-eche maka nkwụnye edemede gị gụnyere adreesị zuru ezu gị na akwụkwọ ma ọ bụ na e-mail gị. Anyị na-ekpe ekpere maka gị Jizọs, Onyenwe anyị dị ndụ, na Ọ ga-eme ka nghọta, zipu, nduzi, na-ewusi ike, na-echebe ma na-anọnyere gị kwa ụbọchị nke ndụ gị!
Gị na ọrụ Ya,
Abd al-Masih na ụmụnne ya n'ime Onyenwe anyị
Page last modified on March 23, 2020, at 11:40 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)